Health | Posted on Aug 7, 2019 by Yin Moe Shinn
Insomnia နဲ့ နောက်ဆက်တွဲရောဂါများ....
ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်နေကြတဲ့အိပ်မရခြင်းရောဂါနဲ့ အတူစိတ်ကျန်းမာဖို့ ရာဘာတွေလိုအပ်သလဲ ?
ရောဂါလို့ မမည်တဲ့ရောဂါ ဒီရောဂါအမျိုးအစားကိုယနေ့ ခေတ်လူတော်တော်များများကြုံတွေ့ ခံစားနေကြရပါတယ်။ လူတိုင်းလိုလိ်ုခံစားရမှန်းမသိခံစားနေကြတဲ့ရောဂါကတော့အိပ်မပျော်ခြင်းရောဂါပါ။ အိပ်စက်ခြင်းဆိုတာကလူသားတိုင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့အားတစ်ခုပါ။ သဘာဝတရားအတိုင်းစားသောက်အိပ်စက်ခြင်းကို ပျက်ကွက်ပါများလာတဲ့အခါကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးထိခိုက်မှုတြွေုဖစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဆေးရုံဆေးခန်းမှာပြနေကြတဲ့ရောဂါလိ်ု့ မသတ်မှတ်ထားတာကြောင့်လူတွေကသူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ ဖြေရှင်းနေကြပါတယ်။ အဲ့ဒီရောဂါရဲ့ အခြေခံရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့အိပ်ရခက်ခဲတာ အိပ်ပျော်ဖို့ ခက်ခဲတာ၊အိပ်နေရင်းနိုးလာတာ ၊ ပြန်အိပ်ဖို့ ခက်ခဲတာစသဖြင့်အိပ်စက်ခြင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးခံစားရတဲ့ ဝေဒနာပါ။ေ
ပါ့ပေါ့ပါးပါးရောဂါအနေနဲ့ သတ်မှတ်ထားလို့ လုံးဝမရတာကသူ့ မှာနောက်ဆက်တွဲ ရောဂါနဲ့ အခြေအနေဆိုးတွေရှိနေတာကြောင့်ပါ။ ပုံမှန်လိုအပ်တဲ့အိပ်စက်ခြင်း ၈နာရီကိုမပြည့်ဝတော့တဲ့နောက်ကိုယ်ခန္ဓာကနေလို့ မကောင်းတော့ဘဲပင်ပန်းမှုတွေဖြစ်လာမှာပါ။ အဲဒီနောက်လုပ်ငန်းခွင်ရော အခြားနယ်ပယ်တွေမှာပါထိခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ သေချာလေ့လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထပ်အိပ်မပျော်တဲ့ရောဂါရဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့နေ့ စဉ်ကြုံတွေ့ နေရတဲ့ဘဝအမောတွေကြောင့်ပါ။ ရှုန်းကန်နေကြရတဲ့နေ့ စဉ်ဘဝမှာအခက်အခဲတွေကြုံရပါများလာတော့စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ကိုခံလာရပါတယ်။ ဒီအရာကအိပ်စက်ခြင်းကိုအဓိကထိခိုက်စေတာပါ။ ဆက်စပ်နေတဲ့ဒီအရာရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုကျိုးတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးလူတွေက level အလိုက်ခံစားကြရပါတယ်။ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရသူတစ်ချို့ ကတော့သေဆုံးရတဲ့အထိဖြစ်စေပါတယ်။ဒီရောဂါကတော့ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်နေတဲ့ကူးစက်ရောဂါလိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရောဂါပါ။ နိုင်ငံတိုင်းလိုလိုမှာအဖြစ်များနေတဲ့ရောဂါဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်အသက် ၂၀ကျော်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေရပြီဖြစ်တဲ့လူတွေများပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်တွေမှာလည်းဖြစ်လေ့ရှ်ိတယ်ဆိုပေမယ့် စစ်တမ်းအရဆိုရင်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်တဲ့သူတွေပိုခံစားနေကြရပါတယ်။လုပ်ငန်းခွင်ကပေးတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်နောက်ဆက်တွဲအိပ်ရေးပျက်ခြင်းကနေဆက်စပ်ရောဂါတွေဖြစ်လို့ လာတာပါ။ တိုးတက်လာတဲ့ဒီနေ့ ခေတ်မှာပြောင်းလဲခြင်းများစွာကလည်းအဆိုးအကောင်းဒွန်တွဲလို့ နေပါတယ်။ နည်းပညာတွေတိုးတက်လာတဲ့အပေါ်လူတွေကအလုပ်လုပ်ရင်းအချိန်တွေကုန်ဆုံးလာကြရပါတယ်။ ဒါကလည်းတိုးတက်လာတဲ့အလျောက်ဘောင်ဝင်တန်းဝင်နေနိုင်ဖို့ ပါ။ဒီလိုပြောင်းလဲမှုတွေကြားလူတွေရဲ့ မိတ်ဆွေကလူတွေမဟုတ်တော့ဘဲ စက်ပစ္စည်းတွေဖြစ်လို့ လာပါတယ်။စက်ပစ္စည်းတွေကိုပိုခင်တွယ်လာပြီးဘေးကအပေါင်းအသင်းထက် Social network ကအပေါင်းအသင်းတွေကပိုပြီးခင်တွယ်စရာကောင်းသလိ်ုဖြစ်လာတဲ့နောက်အရာရာကလွဲမှားလို့ လာပါတယ်။ အဖက်ဖက်ကလွဲမှားလာကြတဲ့နောက်စိတ်ဓါတ်ကျဆင်းမှုနဲ့ အတူပင်ပန်းတဲ့နေ့ တွေကိုပိုင်ဆိုင်လို့ လာမှာပါ။ ပင်ပန်းတယ်ဆိုတာလူပင်ပန်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲစိတ်ပင်ပန်းတာကိုဆိုလိုပါတယ်။ ဒီကနေအိပ်စက်ခြင်းကိုထိခိုက်စေမယ့်အတွေးတွေနယ်ချဲ့ လို့ လာပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အလုပ် ၊ ကျောင်း ၊ ငွေကြေး ၊ မိသားစု ၊ အချစ်ရေးစတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးအခက်အခဲတွေကြုံရတဲ့အခါစိတ်ဖိစီးမှုကိုအဓိကဖြစ်စေပါတယ်။
အဲဒီလူတွေကတခြားးလူနဲ့ ယှဉ်ရင်တဖြည်းဖြည်းအနောက်ရောက်လို့ လာပါတယ်။ အနောက်ရောက်လာလေလေ ကျရှုံးသလိုဖြစ်လေလေ အဲဒီစိတ်တွေနဲ့ အိပ်မရတာများလာတဲ့အခါMental illness ဆိုတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်ခံစားမှုတွေဖြစ်လာပြီးစိတ်မကျန်းမာမှုကနေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေပါဆက်တိုက်ဖြစ်လို့ လာပါတယ်။ စိတ်ကျန်းမာမှ ကိုယ်ကျန်းမာမယ်ဆိုတာအမှန်ပါ။ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတစ်ဦးစီတိုင်းမှာမတူညီကြတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကအသီးသီးရှိလို့ နေပါတယ်။ အဲတာကြောင့်လည်းဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်နေတဲ့ရောဂါလို့ ခေါ်တာပါ။ ဒါကိုဘယ်လိုမဖြစ်အောင်နေမလည်းဘယ်လိုကုသမလဲ ? ကိစ္စတိုင်းအခက်အခဲရှိသလိုဖြေရှင်းလို့ ရတဲ့နည်းလမ်းကလည်းသူ့ အလိုလိုရှိပြီးသားပါ။ ဒီတော့ဘယ်ကိစ္စကိုမဆိုလက်မလျော့သင့်ပါဘူး။ နောက်ပြီးစိတ်ဖိစီးမှုစ်ိတ်အဆင်မပြေမှုတွေကြုံလာတိုင်းတစ်ယောက်တည်းကြိတ်မခံစားပါနဲ့ ။ ဝေမျှလိုက်ပါ ကိုယ်ခင်တွယ်ရတဲ့လူကို ၊ အပြင်ကလက်တွေ့ ဘဝကိုတန်ဖိုးထားပါ အနားကလူတွေနဲ့ အဆင်ပြေအောင်နေပါ။
Social app တွေပေါ်ကသူငယ်ချင်းတွေ အသိုင်းအဝန်းတွေဆိုတာတကယ်စစ်မှန်တယ်လို့ ဆိုလို့ မရတာကြောင့်ဒါကိုဘဝကြီးလို့ မတွေးပါနဲ ။ များသောအားဖြင့်ဆိုးရွားတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကို social ကနေတစ်ဆင့်အဖြစ်များတာကြောင့်ပါ။ စာများများဖတ်ပါ။ အချိန်လုပြီးရှင်သန်နေရတဲ့နေ့ စဉ်ဘဝမှာစာဖတ်ဖို့ အချိန်ပေးဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဒါကအမှိုက်မဖြစ်ပါဘူး။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းမှုတွေအတွက် ဗဟုသုကဖြစ်စေတာမို့ ပါ။ စာအုပ်ကနေတစ်ဆင့်ဘဝအခက်အခဲဖြေရှင်းနည်းတွေကိုလည်းသိရှိနိုင်မှာပါ။
ဘာကိုမဆိုအကာင်းမြင်စိတ်နဲ့ ကြည့်ပါ။ သင်ကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ချမ်းသာလာပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ချမ်းသာခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲကကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စေမှာပါ။ ဒီလိုဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲရောဂါဆိုးတွေနဲ့ ကင်းဝေးစေမှာပါ။ အတိုက်အခိုက်ဆိုတာကလည်းနေရာတိုင်းကနေဝင်လာနိုင်တာမို့ ဘယ်လ်ိုနည်းနဲ့ ဖြစ်ဖြစ်အလျော့မပေးဘဲ ၊ စိတ်မညစ်လိုက်ပါနဲ့လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
နောက်ပြီး Socila app တွေနဲ့ ဘဲအချိန်မဖြုန်းဘဲသီချင်းနားထောင်တာ ၊ စာဖတ်တာ ၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ ၊ တရားထိုင်တာမျိုးလေးတွေ လုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ဒီအရာတွေကတကယ်ကိုစိတ်ခွန်အားဖြစ်စေမှာပါ။
ဒီတော့ဒီစာလေးကတေစ်ဆင့် ဘဝအမောတွေကြောင့်ရလာတဲ့အခက်အခဲတွေအပေါ်စီးမျောပြီးဘဝမနစ်မွန်းသွားစေဖို့ နဲ့ အိပ်ရေးဝဝ အိပ်စက်ခြင်းကလူသားတိုင်းအတွက်အရေးကြီးကြောင်းသိစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ စိတ်ခွန်အားတွေရပြီးကျန်းမာတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။
Editor : Bo